ओलीको प्रश्नमा साइजमा ल्याउने गरि यसरी दिए प्रचण्ड र देउवाले जवाफ - जिस्ट खबर अर्थात यथार्थ खबर
ओलीको प्रश्नमा साइजमा ल्याउने गरि यसरी दिए प्रचण्ड र देउवाले जवाफ
काठमाडौँ, २४ जेठ-
ओली : स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन भए पनि दोस्रो चरणको निर्वाचन बाँकी नै थियो । यही वेला प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आयो । उहाँ (प्रचण्ड)लाई झन्झट लागेर हो कि ? गर्न नसकेर हो कि ? दोस्रो चरणको निर्वाचन गराउन सक्दिनँ भनेर हो कि, काम गर्न सक्दिनँ भनेर हो कि, सत्ता सहयात्रीले काम गर्न नदिएर हो कि, दबाब दिएर पो हो कि, के कारणले राजीनामा दिनुभयो ? सदनलाई जानकारी गराउँदा राम्रै हुन्थ्यो, नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
देउवा : प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएको विषयमा बडा चिन्ता देखाउनुभयो । मेरो स्वार्थका कारण भनेको होइन, यस्तो चिन्ता पछि पनि गर्दै जानुहोला ।
प्रचण्ड : कांग्रेसले दबाब दिएर राजीनामा दिएको होइन । मैले दुवै चरणको निर्वाचन गरेर छाड्छु भन्दा कांग्रेसले नदिनुपर्ने कारण थिएन । एमालेसँग बजेटपछि सरकार छाड्ने र मेरो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने समझदारी थियो, त्यसवेला हाम्रो । एमालेका अन्य नेतालाई पनि राम्रैसँग जानकारी छ । एमालेसँगको सहमति पालना नभएपछि नयाँ मोड आयो । नयाँ राजनीतिक संस्कारको विकास गर्न मैले राजीनामा दिएको हुँ । इमान भन्ने कुरा मुखले भनेर हुँदैन, व्यवहारमा स्थापित गरेर देखाउनुपर्छ । संस्कार भनेको व्यवहारमा देखाउन सक्नुपर्छ । मेरो आफ्नै इच्छाले राजीनामा दिएको हो । कसैको दबाबले होइन ।
ओली : प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई महाअभियोग प्रस्ताव स्वच्छ, पवित्र भावनाका साथ आएको देखिएन । राज्य यसरी चल्ने, शक्तिको दुरुपयोग गर्ने हो भने नराम्रो हुन्छ । प्रधानन्यायाधीशलाई पेन्सनपट्टा बनाउन हिजो अर्थ मन्त्रालय जाँदासम्म महाअभियोग रहेको भन्दै अस्वीकार गरेको कुरा आयो । अर्थ मन्त्रालयले किन यसो ग¥यो ? योभन्दा ह्युमिलेसन के हुन्छ ? उहाँलाई महाअभियोग छ भन्ने जानकारी अर्थलाई कसरी भयो ? फिर्ता लिइसकेपछि त्यसको जानकारी फेरि किन भएन ? असहिष्णु र अपमानजनक व्यवहार कसैले गर्नुहुँदैन ।
देउवा : प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाअभियोग प्रस्ताव अस्ति नै फिर्ता हुन्थ्यो । संसद् चल्नै नदिँदा फिर्तामा ढिलाइ भएको हो । संसद् कसले रोक्यो ?
प्रचण्ड : महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिएका थियौँ धेरै अगाडि नै । तपार्इंहरूले फिर्ता लिनका लागि औपचारिक प्रस्ताव ल्याउन किन संसद् अवरोध गरेर ढिला गर्नुभयो ? म प्रश्न गर्न चाहन्छु– संसद्मा अवरोध गरेर तपाईंहरूले लोकतान्त्रिक विधि, मूल्य–मान्यताअनुसार काम गर्नुभयो र ?
भरतपुरमा मतगणना विवादका विषयमा
ओली : भरतपुरमा मतगणना करिब अन्तिम अवस्थामा पुगेका वेला एकाएक उफ्रिएर मतपत्र च्यात्ने योजना काहाँ बन्यो ? को–को त्यसमा संलग्न भए ? म त्यता जान्न । खोतल्ने हो भने हामी सबैलाई अप्ठ्यारो लाग्छ । त्यहाँ सत्तापक्षका उम्मेदवार रेणु दाहालका प्रतिनिधिले उफ्रिएर मतपत्र च्याते । केही मतपत्र च्यातिँदैमा मतगणनास्थल कब्जा भनेर प्रायोजित प्रचार गरियो । सत्तापक्ष सत्ताको आडमा निर्वाचनमा हार्न तयार छैन । निर्वाचनमा हार–जित हुन्छ । को–को उम्मेदवार हार्नै नहुने हो ? हराउन नपाइने हो ? प्रतिपक्षीलाई भनिदिएको भए हामी पनि ‘माइन्ड मेकअप’ गथ्र्यौँ ।
प्रचण्ड : घटना घट्नु ५–६ दिनअघि भरतपुरका मेयरका उम्मेदवार रेणु दाहाल जो मेरी छोरी पनि हुन् । मैले भनेको थिएँ तिमी जिते पनि हारे पनि जित्यौ, देशले तिमीलाई चिन्यो, तिमी स्थापित भयौ । तीन दिनयता भने मेरो कुनै सम्पर्क भएको थिएन । प्रतीकात्मक रूपमा कहाँ–कहाँ के भए नखोतलौँ भन्नुभयो, म उहाँलाई भन्छु, त्यत्ति भनिसक्नु भयो, सबै भन्नुहोस् म सबैको सामना गर्न तयार छु । लुकीछिपी छ भन्ने तपाईंलाई त भन्न के लाज भयो र ? गर्नेलाई लाज लाग्नुपर्ने हो । निर्वाचन आयोगको काममा हस्तक्षेप गर्ने, अदालतले गर्ने कुरामा हस्तक्षेप गर्ने र एउटा घटनालाई सामान्यीकरण गर्ने काम नगरौँ ।
सबैभन्दा बढी पारदर्शी अब भरतपुरमै हुन्छ । सबैको आँखा छ । अदालत, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल, सबैको आँखा छ । हराउने–जिताउने कुरा पनि गर्नुभयो । यसबारे जवाफ दिनुपर्छ भन्ने लागेको छैन ।
ओली : देउवालाई सोधेँ, भारतपुरको मतपत्र च्यातिएको विषयमा कांग्रेसको धारणा के छ ? उहाँले थाहा छैन भन्नुभयो । कांग्रेस आजकल धेरै कुरामा बोल्नै छाडेको छ । मुखमा पानी हालेको छु भन्दैमा बोल्नै मिल्दैन र ? प्रचण्डलाई सोधेँ, माओवादी केन्द्र के भन्छ ? प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, कानुनबमोजिम गर्नू भनेको छु मैले ।
देउवा : निर्वाचन आयोग हामीले संवैधानिक आयोगका रूपमा बनाएका छौँ । आयोगले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझे अदालत जान पाइन्छ । उहाँहरू अदालत जानुभएको छ । विगतमा तपाईंहरूकै कारण पनि रिभोटिङ भएको छैन र ? त्यो अदालतमा भएको विषयमा हामीले धेरै बोल्नु छैन ।
प्रचण्ड : निर्वाचन आयोगले गर्ने कुरा सदनमा ल्याएर अवरोध गर्नुपर्ने थिएन । निर्वाचन आयोगको क्षेत्राधिकार मिचेर किन गर्नुभयो संसद्मा अवरोध ? मैले त घटना घटेलगत्तै घटना दुखद छ, गलत भयो मतपत्र च्यात्ने काम भनेको थिएँ । प्रधानमन्त्रीको हौसियतमा निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्तलाई मैले बोलाएरै भनेको छु, तपाईंलाई के लाग्छ, त्यही गर्नुहोस, घटना दुखद भयो भनेर ।
ओली : प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाएर तर्साउने, पुलिसका उच्च कर्मचारीलाई समातिदिने, निर्वाचन आयोगबाट आफूअनुकूल निर्णय गराउने ? हिटलर कुनै राजघरानाबाट आएका थिएनन्, निर्वाचनबाटै आएका थिए । के यही हो लोकतन्त्र ? के यही हो इमान ?
प्रचण्ड : कति प्रमाण चाहियो ? इतिहासदेखि वर्तमानसम्मको, राजीनामाको विषयसम्मका वेलामा कति परीक्षा दिनुपर्ने हो लोकतन्त्रप्रतिको इमानदारिताको ? तपाईंहरूकै इतिहास हेर्ने हो भने कति वर्ष लागेको थियो ? न्यायालयविरुद्ध के–के भएका थिए भन्ने नबुझिएको हैन । नेतृत्वले आँट नगरेको भए सेना समायोजन, शान्ति प्रक्रिया यो अवस्थामा आउँथ्यो ?
ओली : हुलाकी राजमार्ग, फास्ट ट्र्याकमा मेरै नेतृत्वको सरकारले बजेट छुट्याएको थियो । फास्ट ट्र्याकमा दोस्रोपटक भने पनि शिलान्यास गर्नुभयो । मलाई प्रश्न गर्नुभएको थियो, भूकम्पपीडितका लागि सरकारले केही गरेन, त्रिपालमै भूकम्पपीडितको बास भयो । तपाईंले अहिले १० महिना सरकार चलाउनुभयो क्यारे, त्रिपालमुनिका भूकम्पपीडित के अहिले पक्की घरमा गएको हो ?
सरकारले गरिनेछ–गरिनेछ भनेर १ सय १२ ठाउँमा भनिएको थियो, त्यसमध्ये कतिवटामा गरिए ? शान्ति–प्रक्रियाको कामै अगाडि नबढेको भन्नुभएको थियो मलाई । अहिले के भयो ? टिआरसीमा अध्यक्ष र सदस्यहरूको बोलचाल नहुने अवस्था मिलाउनुभयो ? के भयो प्रधानमन्त्रीज्यू ? अब हुनेले यी विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्ला ।
आर्थिक वृद्धिदर कुन नीति तथा कार्यक्रमका कारण ल्याउनुभयो ? एकातिर लोडसेडिङ समाप्त पारेँ भनेर यसो गर्ने (जुँगामा ताउ लगाएर देखाउँदै), तर अर्काेतिर के–कति प्रगति गर्नुभयो र ? मैले सरकार छाडेपछि कति वृद्धि गरियो बिजुली ? मलाई सन्तोष छ कमसेकम ।
देउवा : पूर्व–पश्चिम राजमार्ग पहिल्यैदेखि ४ लेनको थियो । त्यो हाम्रो पार्टीले गरेको हो ।
प्रचण्ड : तपाईंहरूले दम्भ नदेखाए हुन्छ । सबै काम अरूले गरेर मैले टुटी मात्र खोलेको हो र ? सबै मैले गरेको टुटी मात्र खोलेको भनेको जस्तो, यसले फाइदा गर्दैन । फास्ट ट्र्याक शिलान्यास सेनाको व्यवस्थापनमा गरेको हुँ । ठिकै छ दोस्रोपटक नै शिलान्यास भएको भए पनि । त्यो जस तपाईंहरूले नै लिनुहोस् । बाटो छिटो बनोस् ।
ओली : सप्तरीमा मान्छे मारिने परस्थिति कसरी बन्यो ? एमालेले न गोली चलायो न हुलदंगा ग¥यो । तर, एमालेको कारण सप्तरीको घटना भयो भनेर आरोप लगाइयो । विरोध गर्ने मधेसी मोर्चा, मार्ने सरकार, मर्ने सर्वसाधारण । अनि, चोखो बच्ने सरकार ? कस्तो अचम्म ।’
देउवा : सुरक्षा निकायले उहाँहरूकै सुरक्षा गर्दा गोली चलाएको बुझेको छु मैले त । प्रहरीमाथि यसरी आरो